Ny antony mahatonga ny TOGAF Framework ampiasaina hampiray ny IT & Business
Ny fiovan'ny raharaham-barotra dia manatsara ny fifandraisana eo amin'ny IT sy ny orinasa. Ny aty ivelany sy ny tanjaka ivelany dia tsy maintsy mandrindra ny fikambanana mba handray tsara kokoa ny filan'ny mpanjifa sy hanatontosana ny fahombiazan'ny asa sy ny zava-baovao. Ny manam-pahaizana IT dia matetika mila mifantoka amin'ny famoronana fanavaozana. Amin'izao fotoana izao, ny engineering engineering dia tsy maintsy raisina amin'ny tanjona voafaritra tsara mba hialana amin'ny fanodinana eo amin'ny fahaiza-manao innovation sy ny teknikan'ny orinasa. Hanao ahoana ny atao hoe Togaf.
Inona ny TOGAF®?
Ny tombony amin'ny TOGAF
Ny Framework Open Architect's Framework, TOGAF, dia fitsipika azo tsapain-tanana ho an'ny famoronana endri-tsoratry ny ezaka. Ny rafitra feno dia mampiditra paikady sy fandaminana fitaovana fanamafisana mba hanomezana fikambanana miaraka amin'ny fahafahana manome toky ny ampahany andrenitra tsirairay.
Tohizo fa ny olona rehetra dia miteny amin'ny fiteny mitovy.
Mitazona lavadim-pifanarahana amin'ny fiarovana amin'ny rafitra voafetra amin'ny fananganana teknika misokatra ho an'ny orinasa lehibe.
Mialà fotoana sy vola ary ampiasao ny fananana be indrindra.
Mitadiava tahan'ny fahombiazana (ROI).
Ny rafitra TOGAF dia azo faritana tsara indrindra avy amin'ireo lafin-taratasy dimy, miaraka amin'ny The Open Group:
Fitsipika fototra, fahitana ary ny fepetra: Ity sary ity dia maneho ny vanim-potoana misy ny fizotry ny fandrosoana. Izy io dia mirakitra ny antonta momba ny fanoritana ny mari-pahaizana, ny fanavahana ireo mpiara-miasa, ny famolavolana fahitana, ary ny fananana fanamarinana.
Business Architecture: Manoritsoritra ny fandrosoan'ny orinasam-pandraharahana mba hanamafisana ny fahitana ny konjure.
Data Systems Architecture: Ity sary ity dia maneho ny fandrosoan'ny famolavolana drafitra modely ho an'ny famolavolana drafitra, anisan'izany ny fanatsarana ny fampahalalam-baovao sy ny fampiharana.
Innovation Architecture: Ity sary ity dia mampiseho ny fanatsarana ny rafitra fanavaozana ho an'ny famolavolana drafitra.
Engineering fanatanterahana: Ity drafitra ity dia ny fankasitrahana ireo sehatra mampiavaka izay tena ilaina amin'ny fiheverana ny fandraharahana.
Amin'ny ankapobeny, ny manam-pahaizana momba ny IT dia nifantoka tamin'ny haisoratra teknolojika vao haingana, ary ny fandrosoana manokana sy ny fanavaozana manokana. Ny fanerena ny fifantohana amin'ny sehatra tokana dia mitovy amin'ny miasa ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra iray - mahatonga azy io ho sarotra ny hanatontosa ny fomba fijery rehetra momba ny orinasa. Ny fijerena dia tokony hanolo-tena amin'ny sehatra rehetra mba hiantohana ny fandaminana ara-dalàna amin'ny fenitry ny raharaham-barotra, ny fahitana, ny zavatra ilaina ary ny famolavolana.
Ny fikambanana dia mandany tsikelikely ny manam-pahaizana IT mba haka ny fahatakarana bebe kokoa ny orinasa mba hiantohana fa ny fandaharanasa fanavaozana dia ampy ny tanjon'ny fandraharahana, ny fahitana ary ny teknika. Ny fampiasana teknolojia TOGAF dia mampirisika ny fahatakarana ny raharaham-barotra sy ny fanatanterahana ny IT dia momba ny fanampiana ny fiantohana ny fandraharahana.
Fampiofanana an'i Togaf : TOGAF ny Framework Open Architect Architecture, mamaritra ny fomba ambaran'ny antsipirihany sy ny loharanom-pitaovana entina hampandrosoana ny Enterprise Architecture.TOGAF 9 no dikan-teny farany amin'ny rafitry ny The Open Group. Azo lazaina fa TOGAF 9 no fenitra iraisam-pirenena ho an'ny Enterprise Architecture.
Mamaha ny olana lehibe indrindra amin'ny fampianarana Training Togabe
Ny fanamafisana an'i Togaf - Torolalana iray feno